192.168.8.1 - Waa Maxay Ciwaanka IP-ga ah?
An Cinwaanka Borotokoolka Internetka waa sumad lambar ah oo loo qoondeeyay dhammaan aaladaha ku xiran shabakadda PC-ga ee adeegsata hab maamuuska Internetka ee gudbinta. Cinwaanka IP-ga wuxuu bixiyaa 2 ujeeddo muhiim ah: isku xirka shabakadda ama aqoonsiga martigeliyaha & cinwaanka goobta.
Cinwaanka IP-ga ee loo qoondeeyay kombuyuutarka shabakadda ama cinwaanka IP-ga ee loo qoondeeyay qalabka shabakadda ee iibiyaha wax soo saarka. Qalabka xiriirinta waxaa loo dejiyaa cinwaan IP ah oo cayiman; tusaale ahaan, sida caadiga ah routerka Linksys waxaa loo qoondeeyay cinwaanka IP-ga 192.168. 1.1
Haddii aad rabto inaad aado meel ka mid ah dunida dhabta ah, waxaad codsaneysaa cinwaankeeda & dhigeysaa GPS-ka. Ka dib markaad jeceshahay inaad aado meel internetka ah, xitaa waxaad weydiinaysaa cinwaankeeda, waxaadna ugu qori doontaa barta URL-ka ee bog internet-ka aad doorbidayso.
Habka loo helo cinwaanka IP-ga ee WIFI ee hoos ku xusan:
Samee kasta oo router ah wuxuu leeyahay cinwaan loo yaqaan 'login router router IP address' oo laga ogaan karo salka qalabka kombiyuutarka. Haddii aan lagu calaamadin halkaas, markaa waxaad ka heli kartaa dukumintiga ama buuga la socda router ka dib markaad iibsatay.
Haddii ISP ay kugu diyaarinayso router-ka sidaa darteed wuxuu si otomaatig ah kuu sheegi doonaa cinwaanka IP-yada & ID-yada si aad uga gasho router-ka oo aad u gasho internetka.
Dariiqa loo helo Deuter Router Username iyo Password?
Aqoonsiga galitaanka caadiga ah waxaa laga heli karaa buugga router-ka ee la yimaada routerka ka dib marka ugu horreysa ee aad iibsato & ku xirto.
Caadi ahaan, ugu badnaan router-yada, Aqoonsiga asalka ah waa labadaba "maamul" iyo "maamul". Laakiin, aqoonsiyadan ayaa is beddeli kara waxay kuxirantahay router sameeye.
haddii buuggu kaa lumo, markaa qofku wuxuu ka heli karaa aqoonsiyo asalka ah laftiisa qalabka kombiyuutarka maaddaama lagu daabacayo dhabarka router kasta.
Markaad isticmaaleyso router-ka, waxaan beddeli karnaa Aqoonsiyada waqti kasta si looga fogaado gelitaanka sharci darrada ah ee shabakadda. Tan waxaa loo sameyn doonaa si dib loogu dhigo routerka & loo galo passkey cusub sida doorashada.
Dib-u-dejinta router waxay haysaa furaha dib-u-dejinta dhowr ilbiriqsiyo iyo router-ka ayaa dib loogu soo celin doonaa cilad-celinta warshaddii hore. Hadda, waad beddeli kartaa goobaha aasaasiga ah & dejisaa IDS-ka soo-galitaanka ee aad dooratay.
Qalabka shabakada waxaa lagu hagaajiyaa cinwaanka IP-ga ah ee caadiga ah; tusaale ahaan, router-yada 'Linksys' waxaa caadi ahaan loo qoondeeyay cinwaanka IP ee 192.168.1.1. Cinwaanka IP-ga ah ee asalka ah ayaa lagu hayaa iyada oo aan waxyeello u geysan macaamiisha badankood wali waa la beddeli karaa si loogu habboonaado qaab-dhismeedka shabakad aad u adag. Booqo albaabka caadiga ah & cinwaanka IP-ga.
Ereyga default router IP address wuxuu tilmaamayaa cinwaan IP router gaar ah oo aad kuxirantahay oo aad iskudayeyso inaad gasho. Waxaa looga baahan yahay shirkad ama shabakadaha guryaha.
The cinwaanka IP-ga ah router-ku waa muhiim in loo kordhiyo websaydhka router-ka si uu u helo gudiga xakamaynta & dejimaha shabakada. Waxaa laga yaabaa inaad si fudud u soo gasho goobaha shabakadaha ee router ka dib markaad ku qorto cinwaankan biraawsarka biraha cinwaanka.